Air System Trasport And Izixhobo - ETCN Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Nemibandela elide yamava kunye umoya nezithuthi fluid bafaka sisebenza, sinceda umthengi phesheya ukufumana ubomi linokuthenjwa kwaye elide insimbi okanye umgca umbhobho ingxubevange ihlangene fast ukuba ngokuba "inkqubo imibhobho super".
Ngenxa bume mveliso phambili kakhulu, yombhobho mveliso zemveli iye akakwazi ukuhlangabezana neemfuneko abathengi 'ngaphezulu lwerhasi ezinzelelweyo. Yombhobho super evelayo njengoko amaxesha ifuna ukwazi ukunceda abathengi ukucombulula iingxaki zabo ukhetho eziphathekayo, uyilo kunye ufakelo.
Olu hlobo umgca Umbhobho kakhulu isicelo weziThuthi ka-Air, egalelwe Gas, Amanzi kunye nezinye izinto. Unalungelo lini na ukuzisa uxhulumaniso nkqi, ukucoca kunye yokonga amandla ukuphucula ukusebenza kunye nexabiso umbhobho line lwangaphakathi.
Sizimisele ekunciphiseni ukusetyenziswa engeyomfuneko amandla amanxuwa inkqubo yokosulela kwegesi, ukuphucula umgangatho kwegesi, ukuqinisekisa ekhuselekileyo, oluzinzileyo ezikumgangatho ophezulu acocekileyo unikezelo umoya izixhobo terminal. Olu hlobo imigca umbhobho ilula kubume, Kulula ukufaka, okonga umbane, ukhuselo lokusingqongileyo, ukhuseleko nokuthembeka e mandla lonke, umgangatho weemveliso igcinwe kwinqanaba eliphezulu. iinkcukacha Inxenye ke ebanzi kwaye bakwazi ukukhawulelana neemfuno zabaxhamli beenkonzo ezahlukeneyo kwiinkalo ezahlukeneyo - izixhobo ze-elektroniki, ukutya neziselo, kwezemveliso mveliso, amandla amatsha, ushicilelo iphepha, yokunxiba kunye namalaphu, izixhobo zonyango, izixhobo zomkhosi.
Andvantages benkqubo line Umbhobho super
Yacaciswa yi uviwo lukazwelonke
0 ukuvuza ne uphawu esebenzayo
Fast ufakelo of Modularization ngaphandle nokudibanisa iintsimbi, ndibopha, nokubotshwa
operation Easy ngaphandle uqeqesho enzima
Easy ukusika khaphu lula on-site ufakelo
uqhagamshelo Flexible kunye repeatable Connect / qhawula
Easy ukongeza umgca shunt
indawo Super entle lwangaphakathi nolwangaphandle
Kule minyaka ingama-20 umthwalo yobomi
umphezulu Smooth zangaphakathi kunye ukukhuhlana lomlingani ephantsi
uyilo Kulungiselelwe nge xhoba umfutho kumgca umbhobho ekupheleni
Precision Cnc Machining Parts, Sheet Metal Fabrication, Iinkonzo iwelding yokulungisa, Metal Ukunyathela, hle Ivoti,